मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टि‘आकाश फाड’ स्टाइलमा मिनी जेनरल इलेक्सन
नेपाल पत्रकार महासङ्घको २६औँ महाधिवेशनअन्तर्गत चैत २५ गते सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । पहिलोपल्ट प्रत्यक्ष नेतृत्व छनोटको अवसरसहित भएको निर्वाचनको मत परिणामपछि कन्टिर–बाबू बडो प्रसन्न देखिएका छन् ।
नहोउन् पनि किन ? उनी पनि यो निर्वाचनसँग प्रत्यक्षतः जो जोडिएका थिए । कन्टिर–बाबूका अनुसार सार्वजनिक अन्तिम मत परिणामअनुसार विपुल पोखरेलको समूहले आकाश फाड र धर्ती फोड स्टाइलले सबैलाई किक मार्दै जित हासिल गरेको छ ।
मतदातामा विपक्षी गठबन्धनप्रति किन यस्तो आक्रोश ? यस्तो भयानक पनि विजय हुन्छ ? करिब १४ हजार मतदाता रहेको निर्वाचनमा तीन हजारभन्दा बढीको मतान्तर ?
महासङ्घको केन्द्र, प्रदेश र शाखाहरू गरी तीनै तहको नेतृत्व चयन गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचन गरिएको यो पहिलो हो । परिणामअनुसार यो समूहले देशैभर विपक्षी समूहको पत्ता साफ गरेको छ तर केन्द्रीय समितिको मत परिणाम त पूरै पत्ता साफ गर्ने खालको छ ।
५२ मध्ये ४९ पदमा विपुल समूहको विजय । तैट् ! मतदातामा विपक्षी गठबन्धनप्रति किन यस्तो आक्रोश ? यस्तो भयानक पनि विजय हुन्छ ? करिब १४ हजार मतदाता रहेको निर्वाचनमा तीन हजारभन्दा बढीको मतान्तर ?
कन्टिर–बाबूका अनुसार हालै सार्वजनिक अन्तिम मत परिणामअनुसार विपुल पोखरेलको समूहले आकाश फाड र धर्ती फोड स्टाइलले सबैलाई किक मार्दै जित हात पारेको छ ।
महासङ्घको यसपटकको निर्वाचनलाई ‘मिनी जेनरल इलेक्सन’का रूपमा लिइएको छ र यसको परिणामलाई पनि त्यही रूपमा बुझ्नुपर्ने आग्रह कन्टिर–बाबूको छ ।
निर्वाचन परिणाम महासङ्घ